warbixin aan loo baahneyn " Ayaan Xersi Magan dhib ka weyn ayaa jiree ...."
WQ. Ahmed Barre | Jan 28, 2003
Waxaan dacwo ka ahay maqaalka cinwaankiisu yahay "Ayaan Xersi Magan dhib ka weyn ayaa jiree halala jihaado".
Waxaan qabaa in qoraaga maqaalku, Ceynte, uu qoray wax aan loo baahneyn oo aan shaqadiisa ahayn aana cid u dirsan. yaa u dirsaday inuu kashifo beenta Somalida kuna daabaco website aduunka oo dhami daalacdo?. Anigu difaaci maayo beenta loo sheego wadamada aan joogno. Hadana raali kama ihi in dad masaakiin ah oo Soomaali laga kashifo Somalitalk.com oo ah website caan ah. Raali kama ahi in wax walba la iska qoro iyadoon laga fiirsan waxa ka iman kara.
Qoraalku wuxuu cadeyn (marqaati cad)u noqon karaa eedeymaha ay INS-tu ku eedeyso Soomalida timaada U.S.A.
Ceynte wuxuu Soomalida badan keeda ku eedeyey:
Hashu Maankeey Gataye Ma Masaar Beey Laqday? .... GUJI
1) In Soomalida badankoodu wadamo kala duwan iska dhiibto.
2) In Somalida banakoodu noloshooda ka been sheegaan (niman iyo naago isqabaa ay yiraahdaan isma qabno).
3) soomaalida qurbaha intooda badan wexeey isku raacsan yihiin in la hagar daameeyo dowladaha marti galiyey.
Ma lihi waxba kama jiraan arimahaas. Laakiin sidee buu ku cadeyn karaa markuu leeyahay "soomalida dhamaan" amaba "badankood"?.
sharci ahaanse yaa u dirsaday? mas'uul ma ka noqon karaa hadii lagu waxyeeleeyo Soomali badan qoraalkiisa?
Ma ogyahay Caynte in isaga iyo idinkaba(somalitalk.com) la idinku dacweyn karo maadaama ay tahay eedeymo uusan qoraaku u heysan wax cadeymo ah( statistical facts)?.
Ugu dambeyntii maqaalku waxaa loo adeesan karaan in lagu waxyeeleeyo Soomalida. Ceyntana shaqadiisa ma ahayn inuu arintaas galo. Idina ma ahayn inaad daabacdaan arin soomaali baadan wax yeeleyn karta.
Waxaan dalbanayaa inaad sida ugu dhaqsaha badan u ga bixisaan maqaalkaas web site-kiina.
Yours Truely, Ahmed Barre
you can post my concern.
Afeef: Aragtida qoraalkaan waa kuwo u gaar ah qoraaga ku saxiixan, kana tarjumi mayaan aragtida SomaliTalk
»»Ayaan Xersi Magan dhib ka weyn ayaa jiree halala jihaado !
Weriyaha Xamar indhihiisu wax wanaagsan ma arkaan
dhegahiisuna wax san ma maqlaan ..Jawaabtii Hassan Nur 22/1
FAALLO: Ayaan waa gabadhii Soomaaliyeed qof Soomaali ah ayaa ku af-lagaadootey diinta Islaamka, faallo dheer oo kuisaabsan... GUJI 21/1